SHIRKA LONDON: Dabinkii Soomaaliya ka badbaaday 57 sano kahor in maanta lagu rido ma mudna.! - Hablaha Media Network
HMN:- Shirka London ee loo balansanyahay horaanta bisha May waxaa lagu soo go’aamin doonaa in Soomaaliya aysan yeelan Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya (Military). Iyada oo Madaxda Qaranka iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyadu isku raaceen shirkii Madasha ee Mogadishu lagu qabtay 15 – 16 April 2017 inla baabi’iyo Ciidanka Military ga ee hada jira. Lana dhiso 18,000 askari oo ka imaan doona kuna ekaan doona xuduudaha isla maamulada ay ka imaanayaan. Kuwaas oo loo qaybsanayo sida soo socota: